२०७२ माघ १७ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
नेका नगरसमितिद्वारा शहीद दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम कार्यक्रम सम्पन्नपछि गठबन्धन र मोर्चाद्वारा विरोध
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ शहीद दिवस शनिवार नेपाली काङ्ग्रेस वीरगंज नगरसमितिले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। बिहान नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालस्थित शहीद थीरबम मल्लको सालिकमा माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रम पार्टीका जिल्ला सभापति एवं सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीको मुख्य आतिथ्यमा भएको थियो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि चौधरीले अस्पतालका बिरामीहरूलाई फलफूल वितरण गरेका थिए। शहीद दिवसको अवसरमा नगर कार्यसमितिले नाउक्षे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आवश्यक इमुलाइजेसन मेसिन १ थान हस्तान्तरण गरेको छ। प्रमुख अतिथि चौधरीले अस्पतालका निमित्त मेसु डा. ऐनामुल हकलाई इमुलाइजेसन मेसिन हस्तान्तरण गरेका थिए। अस्पताल परिसरबाट शुरू गरिएको मोटरसाइकल र्‍याली वीरगंज नगर परिक्रमा गरी बहुअरीस्थित शहीद तेजबहादुर अमात्यको सालिकस्थलमा पुगी शहीद अमात्यको सालिकमा माल्यार्पण गरेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शहीदपुत्र एवं सभासद् राजेन्द्रबहादुर अमात्यलगायतले शहीद अमात्यको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए। उक्त अवसरमा नेता अमात्यले राणाकालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पिताले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए।
आइतवारदेखि पर्सा अदालतमा पेसी
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ पर्सा जिल्ला अदालतमा आइतवारदेखि पेसी चढ्ने भएको छ। जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा साउन ३२ गतेदेखि पेसी रोकिएको पर्सा जिल्ला अदालतमा पर्सा बार र बेन्चबीच भद्र सहमति भएर आइतवारदेखि पेसी सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो। साउन ३२ गते पर्सा बार एकाइले मधेस आन्दोलनको कारण पक्ष–विपक्ष र कानुन व्यवसायीसमेत उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएको जनाउँदै आन्दोलन स्थगित नहुन्जेलसम्मका लागि पेसी नचढाउन पर्सा जिल्ला अदालतलाई लिखित आग्रह गरेको थियो। बारकै आग्रह अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतमा विगत ६ महिनादेखि एउटा पनि मुद्दाको पेसी चढेको थिएन। पर्सा बार एकाइका अध्यक्ष प्रमोद साहले बेन्च र बारबीच भद्र सहमति भएको र मुद्दाका पक्ष–विपक्ष उपस्थित भई पेसी चढाउन आग्रह गरेको खण्डमा त्यस्ता मुद्दाहरूको पेसी चढाउने सहमति भएको बताए। उनले आइतवारदेखि नै पेसीका लागि प्रक्रिया शुरू हुने प्रतीकलाई बताए।
उखु किसानसँग दुव्र्यवहार भइरहेको गुनासो
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ उखु किसान हकहित सङ्घर्ष समिति, पर्साले बारा र पर्सामा जिविस तथा नगरपालिकाले उखु किसानहरूसँग दुव्र्यवहार गरिरहेका गुनासो गरेका छन् । विभिन्न स्थलमा अनधिकृतरूपमा रकम असुली गरिरहेको र मागे जति रकम नदिएमा किसान तथा सवारी चालकलाई दुव्र्यवहार गर्ने गरेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए। रातिको समयमा उखु लिएर टयाक्टर पर्साबाट बारा जाने क्रममा जिविस पर्सा, वीउमनपा, जिविस बारा र कलैया नगरपालिकाको ढाटमा सवारीकर तथा व्यवसाय करको नाममा त्यहाँ बसेका कर्मचारीहरूले किसानहरूसँग दुव्र्यवहार गर्ने र मनपर्दो तरिकाले रकम असुली गर्ने गरेको अध्यक्ष गद्दीले आरोप लगाए। उनले जिविस र नगरपालिकाले तोकेको दररेटभन्दा बढी रकम लिने र सो रकम दिन अस्वीकार गर्ने किसानहरूसँग दुव्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै ढाटमा बसेका ठेकेदारका कर्मचारीहरूले उखु लोड गरिएका टयाक्टर चालकहरूसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र, गाडीधनी प्रमाणपत्रसमेत चेकजाँच गरेर दु:ख दिने गरेको खुलासा गरे। उनले रात्रिकालीन अवस्थामा उखु किसानहरूमाथि भइरहेको दुव्र्यवहार बारेमा स्थानीय प्रशासनलाई अवगत गराए पनि समस
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको बेवास्ताका कारण आरक्ष क्षेत्रमा बमजनका अनुयायीहरूको चहलपहल बढ्दो
प्रस, निजगढ, १६ माघ। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको निषेधित वन क्षेत्रमा तपस्वी भनिएका रामबहादुर बमजनका अनुयायीको चहलपहल बढेको छ। तीन महिनायता बमजनका अनुयायीहरूले चहलपहल बढाएका हुन्। गत कात्तिक महिनाको तेस्रो सातादेखि एक महिनाका लागि आरक्षले तपस्वी बमजन र उनका अनुयायीलाई धार्मिक कार्य गर्न लिखित सहमति दिएको थियो । सोही बहानामा जङगल प्रवेश गरेका अनुयायीहरूलाई निर्धारित समयावधि सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि आरक्षले बाहिर निकालेको छैन। हलखोरिया निषेधित क्षेत्रमा बमजनका अनुयायीहरू पाल टाँगेर बसेका छन्। सो स्थलमा निर्मित अढाई तले पक्की भवन उनीहरूले पुन: प्रयोगमा ल्याएका छन्। बाराको हलखोरिया जङगलस्थित तपस्यास्थलबाट बमजनका अनुयायीहरू बस्तीमा आवतजावत गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले गत कात्तिक २५ गतेदेखि हलखोरिया जङगलमा बस्दै आएको बताए । सो क्षेत्रमा अन्य मानिस पस्दा सेना र आरक्षका कर्मचारीले रोक लगाउने र कारबाई गर्ने गरेका छन्। आरक्ष विस्तार हुनुअघि जिल्ला वन कार्यालयले सो क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हटाएको थियो। तपस्वीको नाममा निर्माण गरिएका घरटहराहरू भत्काउँदै अतिक्र
विवेक र वैभवमध्ये कसलाई रोज्ने ?
दुवैको परिस्थिति एकैजस्तो थियो। दुवैजना एकै गाउँमा वरपर झुपडी बनाएर बस्दथे। मातापिताको निधनपछि ती दुवैको गुजारा जङगलको दाउरा काटेर बेचेर हुन्थ्यो। परिस्थितिको यस समानताको बावजुद ती दुवैको रुचि, प्रवृत्ति, विचार, आकाङ्क्षामा पर्याप्त अन्तर थियो। एक साँझ उनीहरू जङगलबाट दाउरा लिएर आइरहेका थिए, त्यसमध्ये विवेकले भन्यो– “शायद १ हामीले केही पढेलेखेको भए, शास्त्रको अध्ययन–चिन्तन गरेको भए, तब जिन्दगीको स्वरूप नै अर्कै हुन्थ्यो।” “के बेकारको कुरा गर्छौं, विवेक १ पढाइ–लेखाइलाई अब हामीले के गर्नुछ । भगवानसँग प्रार्थना गर, कतै हामीलाई गाडिएको धन भेटोस्, जसबाट बाँकी जीवन आरामले बित्न सकोस्,” वैभवले सधैंजसो विवेकको कुरा काटेर भन्यो। अचानक कुनै मान्छेको तेज आवाज सुनेर उनीहरू तर्सिए। “कोही समस्यामा छ। हामीले उनको सहायता गर्नुपर्छ,” विवेकले भन्यो र उनीहरू दाउराको थुप्रो एक ठाउँमा राखेर आआफ्नो बन्चरो लिएर त्यस दिशातर्फ दौडिए। केही टाढा पुगेपछि उनीहरूले भयानक दृश्य देखे। शिकारीजस्तो देखिने एकजना व्यक्तिमाथि चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। शिकारी नराम्ररी घाइते भएर छटपटाउँदै कराइरहेका थिए।
अति भयो ल्याङल्याङ
ओमप्रकाश खनाल साढे ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको मैदानी भूभागमा जारी आन्दोलनको आयतन जति खुम्चिंदै छ, यसको अवतरणको अपेक्षा त्यति नै अन्योलपूर्ण बन्दै जान थालेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया, यसका सीमित अन्तर्वस्तु र प्रदेशको कित्ताकाँटमा मधेसवादीको असन्तुष्टिमा सिङ्गो राजनीतिक रनभुल्लमा परेको भान हुन्छ । छिटपुट घटनाबाहेक अहिले मधेस आन्दोलनलाई वीरगंजले बचाइराखेको छ। भलै वीरगंजको आन्दोलनको ओजसमेत हलुको हुँदै गएकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक छैन। वीरगंज एकमात्र यस्तो सीमानाका हो, जे जसरी भएपनि यसले नाका अवरोधको लाज ढाकिराखेको छ। समाचार माध्यममा आएका खबरहरूलाई हेर्दा अब वीरगंज नाकाको धर्ना पनि साङ्केतिक विरोधमा समेटिएको छ। साढे ५ महिनादेखिको आन्दोलनप्रतिको लगाव र यसका अवयवहरू समयान्तरमा शिथिल बन्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । यसमा नेतृत्वको वैयक्तिक रुचि र आचरणले प्रभाव जमाउनु पनि अस्वाभाविक होइन। आन्दोलन दिनैन्दिन शिथिल हुँदै जाँदा निकास भने झन् अन्योलतिर धकेलिनु भने विरोधाभासपूर्ण छ। अवतरणमा देखिएको उदासीनता स्वाभाविक छैन। राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि नेतृत्वपिच्
२०७२ माघ १६ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
रक्सौल नाकाबाट मालवाहक सवारी वीरगंज भित्रियो, धर्नाकारीहरू पातलिएको भन्दै कस्टम अधिकारीले मोर्चाका नेताहरूलाई हकारे
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ असोज ६ गतेदेखि मधेसवादी दलहरूले नेपाल–भारत सीमानाका रक्सौल–वीरगंज मितेरी पुलमा धर्ना दिएको कारण रक्सौलमा रोकिएका मालवाहक ट्रकमध्ये केही शुक्रवार वीरगंज छिरेका छन् । बिहान ८ बजेसम्म पाँचवटा ट्रक रक्सौल कस्टम क्लियरेन्स गरेर नेपाल भित्रियो भने नेपालबाट चारवटा भारतीय ट्रक वीरगंज भन्सार क्लियरेन्स गरेर रक्सौल पसेको समाचार छ । आज बिहान मितेरी पुलमा तीनजना धर्नाकारी मात्र बसेका र त्यसमध्ये दुईजना नित्यकर्म गर्न गएको बेला भारतबाट मालवाहक ट्रकहरू नेपाल भित्रिएका हुन् । जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसवादी दलहरूले मितेरी पुलमा बसी नाकाबन्दी गरेपछि भारतले असुरक्षाको कारण देखाएर रक्सौल नाकाबाट कुनै पनि मालवाहक सवारीसाधनलाई वीरगंज प्रवेश गर्न दिएको थिएन । साढे चार महिना लामो नाकाबन्दीमा पहिलोपटक भारतले मालवाहक सवारी साधनलाई रक्सौल–वीरगंज मितेरी पुलबाट भित्रिन दिएको हो । यसअघि वीरगंजमा रोकिएका भारतीय मालवाहक ट्रकलाई पर्सा प्रहरीले मितेरी पुलमा धर्ना दिएका धर्नाकारीहरूलाई तितरबितर पारेर बिहानै रक्सौल पठाए पनि भारतीय पक्षले रक्सौलमा रोकिएका सवारी साधनलाई सो
राजनीति नगर्ने भन्दै काफिला हटे
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहमा प्रदर्शन गरिरहेका धार्मिक काफिलाहरूले शुक्रवार बिहान सो स्थान खाली गरेका छन् । हिजो दिउँसो ३ बजेदेखि सुक्खा बन्दरगाहको आवागमन ठप्प हुने गरी टेन्ट गाडेर काफिलाहरू सडकमा बसेका थिए । माघ महिनामा गाउँहरूबाट निस्किने र भारतको विभिन्न धार्मिकस्थलमा पुगेर फर्किने काफिलाहरू यसपटक जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा सुक्खा बन्दरगाहअगाडि बस्ने र यहीबाट तिलावे पुलमा जल भरी वीरगंजको अलखियामठमा चढाउने घोषणा गर्दै टेन्ट गाडेर हिजोदेखि प्रदर्शन गरेका थिए । श्रीपञ्चमीको दिन भारतको विभिन्न धार्मिकस्थल भ्रमण गरी फर्कने काफिलाहरू हिजो पर्सा जिल्लाको विभिन्न २२ वटा स्थानबाट सुक्खा बन्दरगाहमा एकीकृत भएका थिए । यात्रा अवधिमा निकै कठोर अनुशासनमा बस्ने कावँरियाहरूको काफिलामा गएराति विवाद भएपछि आज बिहान ३ बजे काफिलाहरूले टेन्ट परित्याग गरी स्थान खाली गरेका हुन् । काफिलाका सहभागीहरूले पवित्र मनले धार्मिक आस्थाको साथ हिंडेकोमा राजनीतिक आस्था बोकेर धर्नामा बस्नु अधर्मको काम हुने ठहर गर्दै टेन्ट परित्याग गरी धार्मिक कार्यका ला
सभापतिको अनुपस्थितिले बुथ कमिटीको अधिवेशन हुन सकेन
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साको शुक्रवार हुने भनिएको गाउँ तथा वडास्थित बुथ एकाइहरूको अधिवेशन जिल्ला सभापतिको अनुपस्थितिले गर्दा हुन सकेन । पर्सा जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको ११६ वटा बुथ एकाइ कमिटी छन् । एकाइको अधिवेशनको लागि पर्यवेक्षक खटाउँदा केन्द्रबाट आएका प्रतिनिधि र पार्टी जिल्ला सभापति दुवैको संयुक्त उपस्थितिमा खटाउनुपर्ने प्रावधान छ । पर्यवेक्षकबिना एकाइ अधिवेशन हुन सक्दैन । पार्टी केन्द्रबाट आएका निर्वाचन अधिकृत निरञ्जन आचार्य जिल्लामा रहे पनि पार्टी जिल्ला सभापति चौधरी भने शुक्रवारसम्म पनि जिल्लामा नआइपुगेकाले एकाइ अधिवेशन हुन नसकेको सो पार्टीका जिल्ला नेताहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय तालिकाअनुरूप शुक्रवार बुथ कमिटी, माघ २२ गते क्षेत्रीय समिति र माघ २५ गते जिल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन तय गरिएको छ । बुथ कमिटीको अधिवेशन सकेपछि र क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन हुनुअघि उपयुक्त समयमा नगर कार्यसमितिको अधिवेशन गर्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको निर्देशन रहेको जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
ब्राउनसुगरका नामुद तस्कर सोनार पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले रक्सौलका लागूऔषध ब्राउनसुगरका नाम चलेका तस्कर दीपेन्द्र सोनारलाई पक्राउ गरेको छ । वीरगंज–रक्सौल मितेरी पुल नजिकबाट शुक्रवार बिहान सोनारलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ । उनीबाट ५० ग्रामको हाराहारीमा ब्राउनसुगरसमेत बरामद भएको थाहा हुन आएको छ । लागूऔषध कानुन कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय, वीरगंज र सुरक्षाकर्मीहरूको लिस्टमा रहेका तस्कर सोनार मितेरी पुल आएको मौका छोपी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सो घटना सार्वजनिक गरेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबू श्रेष्ठले दीपेन्द्र सोनार पक्राउबारे अनभिज्ञता जाहेर गरे । उनले आफूलाई सोबारेमा हालसम्म जानकारी नगराइएको प्रतीकलाई बताए । स्रोतका अनुसार सादा पोशाकमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरीले सोनारलाई पक्राउ गरेको हो । सोनार पक्राउ परेपछि वीरगंज तथा रक्सौलका सुरक्षाकर्मीबीचमा हल्लीखल्ली मचेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सोनारसँग गोप्य अनुसन्धान भइरहेको र बरामद ब्राउनसुगर परीक्षणका लागि रोनास्टमा पठाउने तयारी भइसकेको छ ।
रक्सौलका व्यापारीद्वारा व्यापार ठप्प पारी विरोध
राजेश केशरीवाल, रक्सौल, १५ माघ/ रक्सौलका कपडा व्यापारीहरूले सबै पसल बन्द गराइ शुक्रवार पनि विहार सरकारको विरोध गरेका छन् । कपडा बिक्री वितरणमा विहार सरकारले लागू गर्न लागेको नियमले गर्दा हुने मूल्यवृद्धिको भुक्तान आफूहरूले गर्न नसक्ने भएकोले सो नियम खारेज गर्न नर्थ विहार चेम्बर अफ कमर्स पटना तथा टेक्सटाइल्स चेम्बर अफ कमर्स पटनाको संयुक्त आह्वानमा विहारभरि आज कपडा व्यापारीहरूले विरोध गरेका हुन् । रक्सौल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अरुण गुप्ताको नेतृत्वमा निस्केको कपडा व्यापारीहरूको जुलुसले सबै पसल बन्द गराएका थिए । आज दोस्रो दिन पसल ठप्प पारी विरोध जनाइएको हो । यदि विहार सरकारले पहिले कपडाको बिक्रीमा नतिरिएको मूल्यवृद्धि हाल लिने निर्णय खारेज गरेन भने कडा आन्दोलनमा उत्रिने कपडा व्यापारीहरूले जनाएका छन् ।
२७ ड्रम डिजलसहित चारजना तस्कर पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताले गएराति इनर्वा गाउँबाट ना. ३ ख ६५३५ नं.को ट्रक, त्यसमा लोड २७ ड्रम डिजलसहित चारजना तस्करलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिमराका अनुमल क्षत्री, रामकिरण चिमोरिया, अनिश बराल तथा इनर्वा निवासी विष्णुकुमार साह रहेका वप्रका बिर्ताका प्रनि ऐनबहादुर मल्लले जानकारी गराए । गएराति भारतबाट डिजल ल्याइ ड्रममा भरी ट्रकमा लोड गर्दैगर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक सुनील सिंहको नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गरेको प्रनि मल्लले बताए । विगत लामो समयदेखि स्थानीय प्रहरीसँग मिलेमतो गरी तेलधनी मीनु चापागाईंले तेल ओसारपसार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारी तस्करहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेको डिजल, ट्रक र चारजनालाई आवश्यक कारबाईको लागि वीरगंज भन्सारमा पठाइएको प्रनि मल्लले बताए ।
समतामा निश्शुल्क आँखा जाँच शिविर
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ वीरगंज कारागारस्थित समता विद्यालयमा शुक्रवार निश्शुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भयो । वीरगंज पावरहाउसस्थित दृष्टि आँखा अस्पतालले शिविर आयोजना गरेको थियो । अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. हरि शर्माको नेतृत्वमा रहेका चिकित्सकहरूको टोलीले विद्यालयमा अध्ययनरत १९ जना बालबालिकाको आँखा चेकजाँच गरेको थियो । शिविरमा चेकजाँच गरिएकामध्ये ४ जना बालबालिकाको आँखामा इन्फेक्सन देखिएकाले उनीहरूको निश्शुल्क उपचार गरी चश्मामा समेत उपलब्ध गराइने दृष्टि आँखा अस्पतालले जानकारी गराएको छ । सो शिविरमा छपकैयास्थित डिएभीआरभी केडिया स्कूल र मुर्लीको ज्ञाननिकेतन माविबाट सड्ढलित रकमबाट शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गरिएको समता विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका रविना खातुनले जानकारी गराइन् ।
छोराद्वारा अलपत्र पारिएकी आमा
राजेश केशरीवाल, रक्सौल, १५ माघ/ रक्सौलमा एउटा गजब दु:खलाग्दो घटना सामुन्ने आएको छ । उत्तरप्रदेश, जिल्ला जैनपुर, गाउँ फुलपुर निवासी एक वृद्धा महिलालाई उनकै जेठो छोराले अलपत्रमा पारेर फरार भएका छन् । ७० वर्षीय द्रौपदी देवी नाम बताउने ती महिला हाल रक्सौल स्टेसनको शरणमा छिन् । जेठो छोरा लक्ष्मीले नेपालमा आँखाको उपचार गराउन भनी घरबाट ९ दिन पहिले ल्याएको तर रक्सौल स्टेसनमा ओर्लेपछि साथ छोडेर भागेको उनले रुँदै बताइन् । एक/दुई दिन त ती वृद्ध महिलाले आफ्नो छोरालाई स्टेसनको हरेक कुनामा खोजिन् तर नभेटेपछि उनी अहिले स्टेसनवरिपरि भौंतारिरहेकी छिन् । उनलाई रिक्सा मजदुरहरूले खाना खुवाइरहेका छन् । मजदुरहरूले राम्ररी नदेख्ने ती वृद्धालाई लाठी र कम्बल पनि उपलब्ध गराएका छन् । वृद्धासँग कुरा गर्दा उनले आफ्नै छोराले साथ छोडेर गएपछि अब सो घरमा फर्केर नजाने बताइन् । “बरु मर्छु तर घर नफर्किन्नँ,” उनको वेदना सुनाइन् ।
कृषिको संरचनागत रूपान्तरण
शीतल महतो नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३५ प्रतिशत योगदान राख्ने कृषि क्षेत्र अनुकूल वा प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै असर पर्ने गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने विगत २० वर्षमा यो घट्दो क्रममा रहेको छ । यद्यपि मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि यसै पेशामा आश्रित छ । उनीहरू जीवननिर्वाहका लागि मुख्यरूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्छन् । तर पनि मुलुकको कृषिजन्य उत्पादन उपभोगका लागि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकिराखेको छैन । जस कारण खाद्यान्न सड्ढट टार्नको लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादनको आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनत कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु, वातावरण र उर्वरभूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बी
‘मह काट्नेले हात चाट्छ’ भन्नु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो
वैद्यनाथ ठाकुर परिवर्तन संसारको शाश्वत् नियम हो । यो ब्रह्माण्डमा अपरिवर्तनीय केही पनि छैन । परिवर्तनकै अर्को नाम हो, विकास । प्रकृतिको निरन्तर परिवर्तनको चरित्रले गर्दा असङ्ख्य आकाशग·ाभित्रको एउटा आकाशग·ा, जसमा अनगिन्ती ताराहरू छन् । त्यसभित्र हाम्रो सूर्य परिवारको विकास भएको हो । सूर्य परिवारमा पृथ्वी र पृथ्वीमा जीवजगत् तथा जीवजगत्भित्र स्तनधारी जीव र स्तनधारीमा मानवको विकास हुनु परिवर्तनको अति उच्चतम रूप हो । मानव जो बाँदरबाट विकास भएर धर्तीमा देखा पर्‍यो, त्यसले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्न निकै सङ्घर्षहरू गर्नुपर्‍यो । भनिन्छ, ‘परिपरि आउँछ, टरिटरि जान्छ ।’ ज·लदेखि मानव विकासको यात्रा आधुनिक मानवसम्म आइपुग्दा निकै चुनौती र सम्भावनाले भरिएको थियो । प्राकृतिक प्रकोपको अगाडि निरीह मानव समयको परिवर्तनसँगै आफूलाई प्रकृतिसँग अनुकूल बनाएर बाँच्न तथा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न निकै जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूमा आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्‍यो । यस यात्रामा मानिसलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्‍यो, उसको विकसित हुँदै गएको दिमागले । आफ्नो निरन्तरको परिष्कृत दिमागकै कारण एकातिर अनेकौं प्राकृतिक रहस्
एमाले के सोच्दैछ ?
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा एमाले सरकारमा सहभागी थियो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जारी संविधान घोषणामा नेका, एमाले र एमाओवादीको भूमिका बराबर छ । कतिपय बुँदामा सहमति–असहमति सबै दलको थियो तर संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज मानेर मुख्य तीन दलले केही मुद्दामा अरूको प्रस्ताव मान्ने र केहीमा आफ्नो मनाउने गरी संविधान निर्माण गरेका हुन् । जारी संविधानबारे विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेर लामो आन्दोलनको रूप लिएपछि भने दलहरू चोखिन खोज्ने र अर्कोको टाउकोमा दोषारोपण गर्ने चाल चलिरहेका छन् । राप्रपा नेपाल, मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायत वर्तमान सरकारमा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण कुर्सी सम्हालेका दलहरूले संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । उनीहरू ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’को भूमिकामा छन् । भोलि संविधानविरोधी आन्दोलन चुलियो भने उनीहरू नै सबभन्दा पहिले भन्नेछन्– “संविधान ठीक छैन, हामीले सदन र सरकारमा बसेर आवाज उठाएका हौं, सरकारको भण्डाफोर गर्न मात्र सरकारमा गएका हौं ।” उनीहरूले भन्ने बाटो सुरक्षित राखेका छन् । यदि संविधान टिकाउ भयो र आलोचना गर्ने
२०७२ माघ १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
कावँरियाहरूको काफिलाले अब ड्राइपोर्ट घेर्ने
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा बुधवारदेखि हिन्दू धार्मिक काफिलाले बाटो छेकेपछि कारोबार ठप्प भएको छ। तराई–मधेसका हिन्दूहरूको धार्मिक परम्परा अनुसार माघ महिनामा गाउँगाउँबाट काफिला निस्कने र विभिन्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गरी जल भर्ने चलन छ । समूहमा निस्केर हरेक वर्ष भारतको विभिन्न पवित्र धार्मिकस्थल भ्रमण गर्ने काफिला यस पालि भारत नजाने भएको छ । उनीहरू जारी मधेस आन्दोलनको समर्थन गर्दै श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको निकास अवरुद्ध हुनेगरी श्रीसिया चोकमा बसेका छन् । सडक नै ढाकेर काफिला बसेपछि बन्दरगाह आवतजावत गर्ने सवारी साधन अवरुद्ध भएको छ । महिनासम्म सडकमैं पण्डाल हालेर बस्ने काफिलाका अगुवाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले श्री पञ्चमीको दिन तिलावे नदीबाट जल भरेर अलखिया मठमा चढाएपछि मात्रै सडक छोड्ने योजना रहेको बताएका छन् । बिहीवार साँझसम्म पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २२ वटा काफिला सुख्खा बन्दरगाह आइपुेको छ । वीरगन्ज नाका बन्द भएर माल सामान आउन छोडेपछि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहमा मङ्सिर मध्ययता आयात ह्वात्तै बढेको अवस्थामा बिहीवार त्यहाँबाट निस्कन
मैथिल ब्राहमण समाज बाराको प्रथम जिल्ला अधिवेशन, अध्यक्ष नरेन्द्र झासहित १८ जना पदाधिकारी छनोट
प्रस, जीतपुर, १४ माघ/ मैथिल ब्राह्मण सभा केन्द्रीय कमिटिका महासचिव इन्द्रदेव मिश्र तथा केन्दीय सदस्य कमलेश झाको आतिथ्यमा मैथिल ब्राह्मणसभा बाराको प्रथम जिल्ला अधिवेशन सिमरास्थित होटल सम्याकमा एक समारोहबीच हालै सम्पन्न भएको छ । उक्त अधिवेशनले १३ सदस्यीय कार्यसमिति तथा ५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्र झा उपाध्यक्ष नवोनाथ मिश्र, सचिव मनोज झा, सहसचिव चुमनकुमार झा, कोषाध्यक्ष सजन चौधरी तथा सदस्यहरू दिलीप चौधरी, कुलभूषण झा, भगवान झा, राहुल झा, सञ्जय झा, लाल झा, श्यामसुन्दर चौधरी, जगदानन्द झा तथा सल्लाहकारहरू रूपनारायण झा, दिनेश्वर झा, विनयकुमार झा, अम्बोध नारायण मिश्र र कमलेश मिश्र छनोट भएका ढिलोगरी प्राप्त सामाचारमा जनाइएको छ । सो अधिवेशनले ब्राह्मण समाजमा देखिएको कुरीति तथा दहेजप्रथा अन्त्य गरी परम्परागत विधि विधान बमोजिम समाज निर्माण गर्न कार्य समिति सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सल्लाहकार विनयकुमार झाले जानकारी दिएका छन् ।
पर्सा काङग्रेसको अधिवेशन तयारी, सभापति काठमाडौं, निर्वाचन अधिकृत वीरगंजमा
प्रस, वीरगंज, १४ माघ / नेपाली काङग्रेस पर्साको अधिवेशनका लागि केन्द्रले कानुन व्यावसायी निरञ्जन आचार्यलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पर्सा पठाएको छ । जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अभिभारा बोकेका जिल्ला सभापति एवं सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी भने अहिले काठमाडौमा छन् । निर्वाचन अधिकृत आचार्य माघ १२ गते वीरगंज आएका हुन् । माघ १५ गतेदेखि पर्साका गाविस, उपमहानगरपालिका र नगारपालिकाको वडा एकाइ कमिटीको अधिवेशनको मिति तय गरिएको छ । केन्द्रीय तालिका अनुसार शुक्रवारदेखि गाविस, उपमहानगरपालिकाको वडा एकाइ कमिटीको अधिवेशनपछि क्रमश: नगर समिति, क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन हुने बताइएको छ । केन्द्रले जारी मधेस आन्दोलनका कारण क्रियाशील सदस्यको छिनोफानो समयमा गर्न नसक्दा सदस्यताको विषयलाई लिएर विवादित पर्सामा १२ औं महाधिवेसनमा क्रियाशील सदस्य भएकालाई नै यसपटक क्रियाशील सदस्यको मान्यता दिइएको छ । साढे पाँच वर्ष अघि सम्पन्न १२ औं महाधिवेसनमा क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये केहीको निधन भएको छ भने केही अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि अहिले पर्सा काङग्रेस
ठोरी भन्सारद्वारा ६ महिनामा रु ३७ लाख कर असुली
प्रस, ठोरी, १४ माघ/ ठोरी छोटी भन्सारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब रु ३७ लाख कर असुली गरेको छ । गत साउनदेखि पुससम्म रु ३६ लाख ८६ हजार ९ सय ६४ राजस्व असुली गरेको ठोरी छोटी भन्सारका कर्मचारी लक्ष्मी निरौलाले जानकारी दिए । ठोरी छोटी भन्सारले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रु ४ लाख ६४ हजार ३ सय ८९ राजस्व असुली गरेको छ भने भदौ महिनामा रु ४ लाख ३० हजार ७ सय १७ असुली गरेको छ । यस्तै असोजमा रु ७ लाख ९५ हजार ९७, कार्तिकमा रु ४ लाख ७२ हजार ८ सय ८८, मङ्सिरमा रु ६ लाख ६८ हजार ४४ असुली गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । छोटी भन्सारले पुस महिनामा सबैभन्दा बढी रु ८ लाख ५५ हजार ८ सय २९ असुली गरेको छ । ठोरी नाका भएर विशेषगरी कपडा, चिनी, दाल, खुर्सानी, मेशेनरी पार्टपुर्जा लगायत सामग्री चितवन, पोखरा, काठमाडौं, तनहुँ, लम्जुङ, नवलपरासी, गोर्खालगायत जिल्लाहरूमा जाने गरेको छ ।
विचारको युद्धमा चेपिएको नेपाल
विश्वराज अधिकारी प्रथम वा दोस्रो विश्वयुद्ध वा अन्य विभिन्न युद्धहरू विगतमा केवल शक्तिका लागि भएका थिए । युद्धमा संलग्न हुने वा युद्धनायकहरूले युद्ध गर्नुको प्रमुख उद्देश्य कुनै खास क्षेत्र वा विश्वभरि नै शक्तिशाली हुनु थियो । आफ्नो शक्तिले थिचोमिचो कायम गर्नु थियो । तर अहिले जे जति युद्धहरू विश्वभरि मच्चिएका छन, यी सबै प्राय:गरी विचारका युद्धहरू हुन् । विचारका युद्धहरू अस्त्र, शस्त्रका युद्धहरूभन्दा झन बढी घातक एवं बढी हताहत गर्ने किसिमका देखिएका छन् । विचारको युद्ध अफ्रिका, युरोप हुँदै एसियासम्म जुन किसिमले अहिले फैलिरहेको छ, त्यो हेर्दा लाग्छ यो युद्ध विगतका युद्धहरूभन्दा बढी विनाशकारी हुनेछ । यसले बढी हताहत गर्नेछ । ठूलो मात्रामा मानव–विनाश गर्नेछ । के हो विचारको युद्ध भनेको ? आफ्नो विचार अरूमाथि लाद्नका लागि, आफूले लिएको विचार नै सही हो र अरूले लिएको विचार गलत हो भनी प्रमाणित गर्नका लागि, आफ्नो विचारका समर्थकहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा विस्तार गर्नका लागि, आफ्नो विचारद्वारा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नका लागि र आफ्नो विचारद्वारा अरूको बुद्धि भुट्नका लागि अहिले चारैतिर विच
आन्दोलनको छिटो समाधान हुनुपर्छ
श्रीमन्नारायण तराई मधेसमा जारी आन्दोलन छैंठौ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । आमजनताको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ तर सत्ताधारी दलहरूसहित नेपाली काङ्ग्रेसको असंवेदनशीलता, शासकीय एवं राणाकालीन मानसिकता तथा आन्दोलनरत मधेसवादी दलका कतिपय नेताहरूको अहड्ढार, अदूरदर्शिता एवं क्षणिक लोकप्रियता पाउने लालसाका कारण तराई–मधेससहित देशको जनता कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ । आन्दोलनकारी मोर्चाका नेताहरूबीच पनि मतैक्य छैन तथा एकले अर्कोलाई गद्दार तथा आन्दोलनप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । मोर्चाका नेताहरू स्वयं नै विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोध एवं परस्पर अविश्वासबाट ग्रसित छन् । आन्दोलन व्यक्तिको दिनचर्या हुन सक्दैन । यसको छिटो समाधान हुनुपर्दछ । मधेस आन्दोलन लम्बिनु पछाडिका केही कारणको समीक्षा हुनु आवश्यक छ । आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भनेको समानुपातिक समावेशिताको विषय हो । यो यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील माग हो जसलाई लिएर पूरै देशलाई तताउन सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको मागको पक्षमा के हिमाल, के पहाड र के तराई मधेस ७५ वटै जिल्लाका दलित, महिला, आदिवासी एवं जनजातिलाई समर्थनमा उ
पर्साका बर्थिङ्ग सेन्टर
कुनै पनि मुलुक व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । यसमा कसको भूमिका कम र कसको बढी भनेर तौल गर्न कठिन छ । कर्मचारी जतिसुकै इमानदार भए पनि सरकारमा बस्ने नेताहरू भ्रष्ट भए भने मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । नेताहरू नीति निर्माणको तहमा हुन्छन् । ‘विष वृक्ष रोपेर अमृत फल्दैन’ भने सरह नीति निर्माण नै गलत भएपछि जसरी कार्यान्यवन गरे पनि परिणाम नराम्रै निस्कन्छ । त्यस्तो अवस्थमा काम गर्नेको भन्दा सत्ताका नेताहरूको इशारामा घुम्ने कर्मचारीको उच्च मूल्याड्ढन हुन्छ । गलत प्रवृत्तिका नेताहरूको कब्जामा सत्ता धेरै दिन रहयो भने इमानदार प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि क्रमश: बेइमानीको भाइरसले कब्जा जमाउँछ । यो प्रवृत्ति एकोहोरो मात्रै होइन, दोहोरोरूपमा सङ्क्रमण हुने गर्छ । राज्य सञ्चालनको तहमा बसेका नेताहरू इमानदार छन् तर प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्ट छ भने त्यस मुलुकमा पनि विकासको काम हुन सक्दैन । ‘मदिराको प्यालामा सुनको छडी डुबाए पनि उसको गुण परिवर्तन हुँदैन’ प्रशानिक संयन्त्रमा भ्रटाचारी, कमिशनखोर, बेइमानहरूको आधिपत्य छ भने जतिसुकै पारदर्शी नीति
२०७२ माघ १४ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
पोखरियाको सतवरिया टोलमा दुई महिनामा २६ को मृत्यु
प्रस, वीरगंज, १३ माघ/ पोखरिया नगरपालिकामा वडा नं. ४ अन्तर्गत सतवरियाटोलमा तीन महिनामा अज्ञात रोगबाट २६ जनाको मृत्यु भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि आज जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले छानबिन टोली पठाएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका शाखा अधिकृत राजकिशोर दासको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज सो गाविसमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै तथ्याड्ढ सड्ढलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । मृत्यु हुनेमा नाबालकदेखि वृद्धसम्म रहेको तथ्याड्ढ सार्वजनिक गरेको अनुगमनमा खटेका चिकित्सक डा. रोशन चौरसियाले बताए । सो गाउँमा अधिकांश व्यक्ति झाडापखाला, मिर्गौला, पक्षपात, क्यान्सर, ज्वरो र चिसो र रक्तस्रावको कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चिकित्सक डा. चौरसियाले बताए । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा आज जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सो ठाउँमा अनुगमन टोली खटाएको थियो । टोलीले सार्वजनिक गरेको तथ्याड्ढ अनुसार मृत्यु हुनेमा सोनु साहको ५ महिने छोरा, रानीकुमारी (१२ वर्ष), जानकी देवी (७४), जादोलाल महतो (६५), रामचन्द्र महतो (७३), धुन साह कानू (९०), सोमरावती मियाँ (३४
पर्सा जिल्लाका ३३ बर्थिङ सेन्टर बन्द
प्रस, वीरगंज, १३ माघ/ सदरमुकामबाहेक पर्सा जिल्लाका ३३ गाविसमा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टर अहिले धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख पोखरिया अस्पतालमा आजदेखि बर्थिङ सेन्टर सेवा पूर्णरूपले ठप्प भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाको एकल हैकमवादी तथा वनवे अनमि र स्टाफ नर्सको सरुवा गरेको कारण पोखरिया अस्पताललगायत ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बर्थिङ सेन्टर बन्द हुन पुगेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख पोखरिया अस्पतालमा आजदेखि एक्कासि बर्थिङ सेन्टर बन्द भएपछि समस्या भएको स्थानीय बद्री चौरसियाले बताए । पोखरिया अस्पतालमा ६ जना स्टाफ नर्स, ३ जना अनमिको एकैचोटी क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाले एकोहोरो सरुवा गरेपछि कर्मचारी नभएको कारण बर्थिङ सेन्टर बन्द भएको मेसु डा. रोशन चौरसियाले बताए । यस भेगमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य निर्देशनालयले सरुवा गरे पनि सो स्थानमा कसै नपठाउँदा सेवा बन्द भएको उनले बताए । पोखरियामा कार्यरत शुभेच्छा चापागाई, मीना पासवान, दीपा भण्डारी, पुष्पा ओलीलगायतको सरुवा भएको छ । सरुवा भएकामध्ये सबैजना रवाना
मुस्लिम विद्यार्थीका लागि निश्शुल्क लोकसेवा तयारी
प्रस, वीरगंज, १३ माघ/ राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मुस्लिम विद्यार्थीका लागि लोकसेवा आयोगमा जाँच दिन निश्शुल्क तयारी कक्षा शुरु गरेको छ । बुधवार वीरगंज माइस्थानस्थित सीएसई एन्ड आइटीको सभाकक्षमा निश्शुल्क कक्षा उद्घाटन गरियो । कार्यक्रमको मुख्य अतिथि नेशनल मेडिकल कलेजका एमडी बसरूद्दिन अन्सारीले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रम संयोजक जफर अन्सारीको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा मुस्लिम फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष मौलाना नुरूल होदा, नेपाली काङ्ग्रेस वीरगंज नगरसमितिका सभापति महम्मद सहाबुद्दिन, आयोजक संस्थाका आलम गिर अन्सारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रको विभिन्न अ·मा सहभागिताका लागि योग्यता अपरिहार्य रहेको र सो योग्यताका निम्ति आयोगले निश्शुल्क कक्षा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम संयोजक जफर हुसैन अन्सारी (जफर) ले बताए । दुई महिनासम्म चल्ने कक्षामा बारा, पर्सा, रौतहटका २५ जना विद्यार्थी सहभागी छन् । निश्शुल्क कक्षा लिन इच्छुक बाँकी मुस्लिम विद्यार्थीहरूका लागि निवेदन आएको प्राथमिकता अनुसार हरेक दुई महिनापछि सञ्चालन हुने कक्षामा सहभागिता गराउँदै जाने उनले बताए । निश्शुल
आयोगद्वारा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम
प्रस, रौतहट, १३ माघ/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले आज गौरमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका उपनिर्देशक सूर्यबहादुर देउजाको नेतृत्वमा रौतहट आएको तीन सदस्यीय टोलीले मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएको व्यतिmहरूबारे छानबिन परिवारजनसँग भेटेको थियो । निरीक्षणको समीक्षा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ रौतहटको सभाहलमा अन्तक्र्रियामार्फत् गरिएको हो । सो अवसरमा नेपाल नागरिक समाजका सचिव तथा जेष्ठ नागरिक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष विजयकिशोर झा, नागरिक समाजका गौरीशड्ढर मिश्र, नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष अनुरुद्ध बैठा, नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्ला सचिव सुरेश तिवारी, कानुन व्यवसायी सञ्जीवकुमार मल्लिक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रौतहट शाखाका जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता, सल्लाहकारद्वय शैलेन्द्र झा र प्रभात झा, उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, राजदेवी एफएमका राकेश यादव, बज्जिका वाणीका दिनेश यादव, पत्रकार रमेश सिंह, राकेश यादव, कान्तिपुर टेलिभिजनका रौतहट संवाददाता रमेश ठाकुर, रौतहट एफएमका धर्मेन्द्र साह, गोरखापत्र दैनिकका रौतहट संवाददाता सञ्जय मिश्र, महिला गीता देवीलगायतले मधेस आन्दोलनमा
शिक्षामा आशाको सम्भावनाको नयाँ संसार
सञ्जय साह मित्र शिक्षाले समाजलाई डोर्‍याउँछ । शिक्षाको अभावमा समाज अन्धो हुन्छ भनेर सम्भवत: यसै कारण भनिएको हुन सक्छ । शिक्षालाई कतिपयले मानिसको तेस्रो आँखा पनि भन्ने गरेका छन् । हुनत शिक्षाको दृष्टिले अन्धकार समाजमा शिक्षालाई मानिसको तेस्रो आँखा मान्नु स्वाभाविक हो तर अब निरक्षरता उन्मूलन भइरहेको र हरेक मानिसले शिक्षामा अगाडि बढ्ने प्रतिस्पर्धाको युग हुँदै गएकोले शिक्षाको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । अबको संसार शिक्षाको हो र शिक्षाको माध्यमले शिक्षितहरूको हो भन्ने कुरो सबैले राम्ररी बुझेका छन् । यसै कारण शिक्षाको अनेक क्षेत्रको विकास भइरहेको देखिन्छ तर सबैलाई शिक्षित बनाउने र सबैलाई शिक्षाको बाटोमा डोर्‍याउने शिक्षा क्षेत्र नै अनाकर्षणको अवस्थामा रहेकोमा सरकारका पछिल्ला कार्यले गर्दा शिक्षामा नयाँ सम्भावना बढाएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको संसार देखिने अवस्था विकसित हुन लागेको छ । लामो समयपछि प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गरिएको छ । दुई दशकपछि खुलारूपमा शिक्षकको लागि आवेदन माग गरी सरकारले दुईपटक शिक्षक छनोट गर्‍यो । पहिलोपटक गत वर्ष जिल्लास्तरमा र यस व
अल्छीले जति जैसीले जान्दैन
नेपालीमा एउटा उखान छ ‘गाईले जति भैंसीले खाँदैन, अल्छीले जति जैसीले जान्दैन ।’ अल्छी, कामचोरहरू कुरा बनाउन सिपालु हुन्छन् । एउटा काम टार्नको लागि पचासौं बहाना बनाउँछन् । उनीहरू गर्नै परे पनि सजिला तथा सहज कामहरू मात्र रोज्ने र निकै काम गरिरहेकोजस्तो, भ्याइनभ्याई भए जस्तो अभिनय देखाउन खप्पीस हुन्छन् । एउटा काम अर्‍हायो भने दशवटा काम थालेको देखाउँछन् । वर्तमान सरकार अल्छीको भूमिका राम्ररी निर्वाह गरिरहेको छ । मुलुकको अग्रगति र जनताको समस्या समाधानको पक्षमा वरको सिन्का पर सार्न नसकेको सरकारले धेरै गफ दियो । उसको गफ मुलुकबासीलाई अपच भइरहेको बेला फेरि अर्को उपाय निकालेको छ । अब परिणाम वा महत्त्वविहीन सजिलो काम गर्ने । तराई–मधेसको सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी प्रचार शुरु भएको छ । शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रीले सो प्रचारलाई थप पुष्टि गर्दै मन्त्री परिषद्को आगामी बैठकमा वार्ता टोली गठन हुने बताएका छन् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ वर्तमान अवस्थामा मुलुकको निकास सशस्त्र भूमिगत स·ठनको कारण रोकिएको होइन । सबैलाई थाहा छ, जारी मधेस आन्दोलन मधेस केन
२०७२ माघ १३ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
भारतको ६७ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सातवटा एम्बुलेन्स र दुईवटा बस हस्तान्तरण
प्रस, वीरगंज, १२ माघ/ भारतको ६७ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । म·लवार महावाणिज्य दूतावास परिसरमा महावाणिज्यदूत अञ्जु रञ्जनले भारतको राष्ट्रिय झन्डा फहराएर विशेष समारोहको उद्घाटन गरेकी थिइन् । सो अवसरमा महावाणिज्यदूत रञ्जनले गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतवासीको नाममा दिएको सन्देश वाचन गरेकी थिइन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको लागि सहयोगस्वरूप दिएको एम्बुलेन्स र बसहरू महावाणिज्यदूत रञ्जनले सम्बन्धित सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । रञ्जनले सातवटा एम्बुलेन्स र दुईवटा स्कूलबस पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, महोत्तरी, धनुषाका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई प्रदान गरेकी थिइन् । एम्बुलेन्स प्रदान गरिएका सङ्घसंस्थाहरूमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया अस्पताल, महोत्तरीको सोनमा गाविस, वीरगंजको रामकुमार महावीरप्रसाद केडिया आँखा अस्पताल, मकवानपुरको हेटौंडास्थित सहकारी अस्पताल, रौतहटको सोसल वेलफेयर
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसमा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १२ माघ/ ६४ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस म·लवार वीरगंजमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बन्द हडतालको कारण व्यापक आर्थिक क्षति भएकोमा दु:खेसो पोखे । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले बन्द हडतालको कारण प्रमुख नाका वीरगंज प्रभावित भएको टिप्पणी गरे । वीरगंज भन्सारले देशकै अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोमा अहिले अर्थतन्त्र धराशयी भएको उनले बताए । राजनीतिक मुद्दाको विषयलाई लिएर शुरू भएको बन्द हडतालको कारण अर्बौ रुपैयाँ तस्करको हातमा गएको प्रजिअ घिमिरेले बताए । उद्योगी–व्यवसायीलाई परेको मर्का राज्यले बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । भन्सारलाई आधुनिकीकरण गर्न शुरू गरिएको सफ्टवेयरको कमान्ड विदेशमा रहेकाले अब ती डिजिटल कमान्ड नेपालबाट नै सञ्चालन होस् भन्ने चाहना रहेको र राज्यले पनि आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले तेस्रो मुलुकबाट कोलकातामा आएको सामानको डिटेन्सन चार्ज
न्याय सम्पादनमा कुनै कसर राखिंदैन –जि. न्यायाधीश आजाद
प्रस, परवानीपुर, १२ माघ/ पर्सा जिल्ला अदालतका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा तथा न्याय सम्पादनको काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन पर्सा जिल्ला अदालत बार एकाइले म·लवार आयोजना गरेको परिचयात्मक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश आजादले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । पर्सा जिल्ला अदालतमा यसअघि ६ वटा इजलास रहेकामा हाल ९ वटा इजलास बनाइ अदालतको कामकार्यबाही अघि बढाउन न्यायपरिषद्को निर्देशन रहेको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश आजादले सहकर्मी न्यायाधीश र सम्पूर्ण पर्सेली कानुन व्यवसायीलाई अदालतको दायित्वमा सहयोग गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । कानुन र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिने तथा निर्दोषलाई न्याय दिने कुरामा आफू अडिग रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बारको तर्फबाट पर्सा बार एकाइ अध्यक्ष प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्ला अदालतलाई यस्तो सङ्क्रमणकालको अवस्थामा पूर्णरूपले सुचारु गर्नुपर्ने, मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ६२(५) बमोजिम बन्द, हडतालमा तारेख जोड्ने १० दिने म्यादको सुविधा न्याय उपभोक्